သတင်း - ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်များကို Curing & တိုးတက်စေသောအကြံပြုချက်များကိုထိခိုက်စေသောအချက်များ
ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်များ Curing & တိုးတက်မှုအကြံပြုချက်များကိုထိခိုက်စေသောအချက်များ
စံပြကုထုံးသက်ရောက်မှုများရရှိစေရန်အောက်ပါအချက်များအပါအ ၀ င်အချက်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
အပူပေးခန်းနှင့်စံပြအခြေအနေပုံစံ ၁။ အပူပေးစက်နှင့်လိုဏ်ခေါင်းမှလေပူတိုက်နှုန်း အခန်းနှင့်မြေပြင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခြမ်းတွင်လုံလောက်သောတူညီသောအပူချိန်ရှိသောလေပူရှိသည်။ အမှန်တကယ်သတ်မှတ်အပူချိန်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားချက်၊ အပူထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်တောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဖလင်လိပ်များသည်ရွေ့လျားရန်လွယ်ကူသည်။
၃။ အ ၀ တ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ corona တန်ဖိုး၊ အပူခံနိုင်ရည်စသည်
4. ကော်: အရည်ပျော်ကော်၊ solventless ကော်၊ တစ်ခုတည်း (သို့) နှစ်ဆပါဝင်သောရေအခြေခံကော်၊ ပူအရည်ပျော်ကော်၊
ဤစာတမ်းသည် lamination film များနှင့်ကော်များကိုအဓိကထားသည်။
1. Lamination ရုပ်ရှင်များ
PE film ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အပူခုခံနိုင်မှုနှင့်အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်တို့သည် PE ၏သိပ်သည်းဆမြင့်တက်လာသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။ PE ရုပ်ရှင်များသည်သိပ်သည်းဆတူညီသော်လည်းကွဲပြားသောထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကွဲပြားသောတင်ဆက်မှုများရှိသည်။
CPE သည်ပုံဆောင်ခဲနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အနိမ့်အကျဲတို့ဖြင့်လျင်မြန်စွာအအေးခံနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းမှုကမူမမှန်ဘဲ၊ ၎င်းသည်မြင့်မားသောကူးစက်မှုကိုဆိုးရွားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်စေသည်။ LDPE နဲ့အတူတူပါပဲ။ ထို့ကြောင့် PE ရုပ်ရှင်များကိုသုံးသောအခါအပူချိန်ကိုမြင့်အောင်မထားပါနှင့်။ PE ၏အပူခုခံမှုတိုးတက်လာသောအခါအပူပေးသောအပူချိန်သည်ပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်သည်။
၂.၁ Ethyl ကော်ကိုအခြေခံသည်
1. အပူချိန် ၃၅℃အချိန် ၂၄-၄၈ နာရီ
2. အပူချိန် ၃၅-၄၀℃အချိန် ၂၄-၄၈ နာရီ
3. အပူချိန် 42-45℃အချိန် ၄၈-၇၂ နာရီ
4. အပူချိန် ၄၅-၅၅℃အချိန် ၄၈-၉၆ နာရီ
၅။ အထူးအပူချိန် ၁၀၀ ကျော်℃နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအရအချိန်။
အသုံးများသောထုတ်ကုန်များအတွက်ရုပ်ရှင်၏သိပ်သည်းဆ၊ အထူ၊ တားဆီးဆန့်ကျင်မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်စွမ်းနှင့်အိတ်အရွယ်အစားတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်အပူချိန်ကိုမြင့်အောင်မထားသင့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၂-၄၅℃ သို့မဟုတ်အောက်တွင်လုံလောက်ပါ၊ အချိန် ၄၈-၇၂ နာရီ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအပူခုခံမှုလိုအပ်သောအပြင်ဘက် lamination ရုပ်ရှင်များသည် ၅၀ ကျော်ကဲ့သို့အပူချိန်မြင့် curing အတွက်သင့်တော်သည်℃မရ။ PE သို့မဟုတ်အပူပိတ် CPP ကဲ့သို့အတွင်းပိုင်းရုပ်ရှင်များသည် ၄၂-၄၅ အတွက်သင့်တော်သည်℃ဆေးကြောချိန်ပိုကြာနိုင်သည်။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူခုခံမှုလိုအပ်သောဆူညံသံများ (သို့) ပြန်လည်တုံ့ပြန်သောထုတ်ကုန်များသည်ကော်စက်ရုံမှပေးသောပိုးသတ်အခြေအနေများနှင့်အညီဖြစ်သင့်သည်။
၂.၂ Solventless Adhesive
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်လိုအပ်ချက်မရှိလျှင် solventless laminating ထုတ်ကုန်များ၊ အတွင်းပိုင်းရုပ်ရှင်များတွင်သိပ်သည်းဆနိမ့်သောကော်များပါ ၀ င်သောကြောင့်တံဆိပ်ခတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ၃၈ မှ ၄၀ အထိအပူချိန်လျှော့ချရန်အကြံပြုသည်℃.
အပူအလုံပိတ်ရုပ်ရှင်များသည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားလျှင်အပူပေးသောအပူချိန်သည် ၄၀-၄၅ ဖြစ်သင့်သည်℃. တုံ့ပြန်မှုပြီးစီးမှုနှုန်းနှင့်အပူအလုံပိတ်စွမ်းဆောင်ရည်တို့တိုးတက်ကောင်းမွန်လိုလျှင်၊ ဆေးကြောချိန်သည်ပိုရှည်သင့်သည်။
VMCPP ကိုအဖုံးအုပ်သည့်အခါ၊ lamination machine သည်လုံလောက်စွာခြောက်သွေ့ရမည်၊ သို့မဟုတ် aluminized အလွှာသည် oxidized ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆေးကြောနေစဉ်အပူချိန်သည်မြင့်လွန်းသို့မဟုတ်မနိမ့်သင့်ပါ။ အပူချိန်မြင့်လျှင်ပွတ်တိုက်မှုမြှင့်တင်မှုမြင့်မားလိမ့်မည်။
သုတေသနများအရတုံ့ပြန်မှုနှုန်း၏ရှုထောင့်၌ ၃၀ အောက်တုံ့ပြန်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်℃. ၃၀ ကျော်℃၁၀ တိုင်း၊℃ ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် ၄ ​​ဆခန့်တိုးတက်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအပူချိန်တုံ့ပြန်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မမှန်ကန်ပါ၊ မျက်စိစုံမှိတ်။ အချက်များစွာကိုသတိပြုသင့်သည်：အမှန်တကယ်တုံ့ပြန်မှုနှုန်း၊ ပွတ်တိုက်မှုမြှင့်တင်မှုနှင့်အပူတံဆိပ်ခတ်မှုခွန်အား။
အကောင်းဆုံး curing ရလဒ်ရရှိရန်အပူပေးသောအပူချိန်ကို lamination film များနှင့်တည်ဆောက်ပုံများအရကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များသို့ခွဲခြားသင့်သည်။
နှစ်ခု၊ အပူပေးသောအပူချိန်မြင့်လွန်းပြီးပူအလုံပိတ်ရုပ်ရှင်သည်သိပ်သည်းဆနိမ့်သည်။ ထုတ်ကုန်တွင်ဆိုးရွားသောပူနွေးသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပွတ်တိုက်မှုမြင့်မားမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
အကောင်းဆုံး curing အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အပူချိန်နှင့်အချိန်ကိုဆေးကြောရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ၊ ရုပ်ရှင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကော်မှုန်တို့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။